Dad badan oo COVID-19 ugu geeriyooday Magaalooyinka Galmudug | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dad badan oo COVID-19 ugu geeriyooday Magaalooyinka Galmudug
Dad badan oo COVID-19 ugu geeriyooday Magaalooyinka Galmudug
Galmudug ayaa xaqiijisay in sagaal qof ay xanuunka COVID-19 ugu geeriyoodeen deegaanadeeda, sideed iyo afartankii saac ee la soo dhaafay.
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka Galmudug, Axmed Mire Faafaale ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu si weyn u gilgilayo deegaanada Galmudug.
“Waxaan rabaa inaan kuu sheego cudurka COVID-19 reer Galmudug si aad u ballaaran ayuu u soo galay, faafitaan xoog lehna wuu wadaa.” Ayuu yiri Wasiiru Dowlaha oo la hadlay VOA.
Waxa kaloo uu yiri “Afartan iyo sideedii saac ee ugu dambeysay 111 qof ayaa xanuunka laga helay, waad dareemi kartaa tiradaas inta ay le’eg tahay. Deegaanada oo dhan waxaa laga soo sheegaya dhimasho aad u tiro badan, oo calaamadihii iyo waxyaabihii Coronaha lagu yaqaanay dadka lagu arkayo, dadka ugu badan ee dhimanayana inay yihiin dadka waayeelka ah, khabuuraha aad baa dadka loogu aasaa.”
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka Galmudug ayaa sheegay in 48-kii saac ee la soo dhaafay ay sagaal qof xanuunka ugu dhinteen deegaanada Galmudug, xilli sida uu sheegay ay dad badani calaamadaha xanuunka ugu dhimanayaan Guriceel, Caabudwaaq, Gelinsoor iyo Gaalkacyo.
“Dadka xanuunka u dhintay ee la xaqiijiyay afartan iyo sideedii saac ee ugu dambeysay waxay noqdeen sagaal qof, laakiin magaalooyinka Caabudwaaq, Guriceel, Gaalkacyo iyo Gelinsoor dad aad u badan ayaa ku dhimanayo oo calaamadaha laga soo sheegayo. Marka waxaan dhihi karnaa cudurka si xun ayuu hadda ugu faafayaa deegaanada Galmudug.” Ayuu yiri Faafaale.
Faafaale ayaa sababta uu xanuunka ugu faafayo deegaanada Galmudug ku sheegay dadka oo wax badan aan ka garanayn khatarta xanuunka, taxadar badan oo aan jirin, dadka laga helo xanuunka oo aan is karantiilin iyo Wasaaradda Caafimaadka Galmudug oo aan heysanin dhaqaalihii iyo tasiilaadkii ay u baahneyd, si dadka uga wecyigeliso halista fayriska Corona.
Inta badan magaalooyinka dalka ayaa waxaa saameeyay soo kaba kacleynta xanuunka COVID-19, waxaana labadii bilood ee ugu dambeysay dalka ugu geeriyooday boqolaal qof.
Previous articleDowladda Somaliya oo la safatay Boqorka Wadanka Jordan
Next articleMilitariga Kenya oo qarax lagula eegtay gudaha dalkaasi